Heesaagii Haacaaluu Hundeesaa oo lagu aasay magaalada Ambo | Dooxo Diaspora Forum - Golaha Qurbo Joogta Dooxa
Home Articles Heesaagii Haacaaluu Hundeesaa oo lagu aasay magaalada Ambo
Heesaagii Haacaaluu Hundeesaa oo lagu aasay magaalada Ambo
Ammaanka ayaa aad loo adkeeyay iyadoo heesaagii Ethiopia Haacaaluu Hundeesaa goordhow aaskiisa uu ka dhacay magaalada uu ku dhashay ee Ambo.
Haacaaluu oo sidoo kale ahaa qof u ololeeya dadka Oromada ayaa dilkiisa waxa uu sababay in ay ku dhintaan dad ka badan siddeetan ruux kadib markii banaanbaxyo waaweyn ay ka dhaceen dalka Ethiopia.
Meydka Haacaaluu ayaa la dhigey garoonka ciyaaraha magaalada Ambo oo dhinaca galbeed ka xigta illaa boqol kiilomitir caasimada Addis Ababa.
“Haacaaluu ma dhiman waxana uu ku hari doonaa qalbiyada dadka malaayiinta ah ee Oromada,” ayay tiri Santu Demisew Diro, oo ahayd xaaska Haacaaluu.
Demisew ayaa codsatay in taallo laga taago goobtii lagu diley seygeeda ee magaalada Addis Ababa.